Shirkadda Golis oo soo dhaweysay Qoraa Siciid Cali Shire | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis oo soo dhaweysay Qoraa Siciid Cali Shire
Shirkadda Golis ayaa waxay soo dhaweysay qoraaga weyn ee Soomaaliyeed Siciid Cali Shire, Qoraaga ayaa waxaa socdaalkiisa ku waheliyay Cali Cabdulqaadir oo ah madaxa hay’adda “Hadaf” ee Cilmi Baaris xagga waxbarashada ah ka sameysa deegaanada Puntland.
Qaar ka mid ah maamulka shirkadda Golis ayaa soo dhaweeyay qoraa Siciid Cali Shire,ayagoo ku tilmaami wax soo saarkiisa dhinaca qoridda buugaagta in uu yahay mid miro-Dhal fiican leh oo ay dadku ka faa’iidaan.
Waxay tilmaameen in qoraaladiisa dhinaca horumarinta gacansiga iyo maamulka ay shirkaddu aad uga Faa’iiday,dadkana ay ku boorin doonto in ay ku taxnaadaan qoraaladiisa.
Siciid Cali Shire ayaa dhinaciisa tilmaamey in shirkadda Golis iyo asaguba ay ka wada shaqayn karaan sidii dadka aqoonta lagu gaarsiin lahaa,weliba aqoonta xiriirka la leh waxbarashada iyo horumarka dhinacyada dhaqaale.
Shirkadda Golis ayaa ka mid ah shirkadaha sida gaar ah loo leeyahay,misana isku hawsha sidii umadda horumar dhaqaale,Bulsho,Aqoon,intaba loo gaarsiin lahaa.